အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက် | High Quality Slabs | tiles | ကောင်တာများ | အိန္ဒိယ
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်အိန္ဒိယက Black ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဂျက်က Black ကျောက် Absolute က Black ၏အခြားရွေးချယ်စရာနာမတော်သည်. ဤသည်ကျောက်ရရှိနိုင်အမှောင်ဆုံးကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ. ဤသည် Khammam အတွက်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်, Warangal, Chamrajnagar, Mysore, နှင့် Kanakpura. ဤလှပသောကျောက်များ၏စျေးနှုန်းနှင့်အရောင်ခြားနားချက်ကကျောက်တုံးကြီးများရာအရပ်၌ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. Flodeal Inc မှမှာ, ငါတို့ရှိသမျှသည်နေရာတွေကနေ Absolute က Black ကျောက်ကို process. ကျနော်တို့ပြား၌ဤကျောက်ထုတ်လုပ်ရန်, အုပ်ကြွပ်, ကောင်တာများ, ဖြတ်အရွယ်အစား, ခြေလှမ်းများ, risers, နှင့် headstone. ကျောက်ကိုအလွန်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအဖြစ်အုတ်ဂူအတွက်အသုံးပြုသည်.
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ ပြင်းထန်သောအနက်ရောင်, Black က Assuluto, တယ်လီဖုန်းက Black
ရရှိနိုင်အရွယ်အစား ပြား, ကောင်တာများ, tiles, လှမ်း, Risers, Headstone
အပြီးသတ် အရောင်တင်, Flamed, Leathered
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်ပြား
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါယေဘုယျအားဖြင့်ကောင်တာများအောင်အတွက်အသုံးပြုကြသည်. ဒီကျောက်အတွက်ရရှိနိုင်ပြားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်. အရွယ်အစားကြီးမားပြားအတူတူအပိုင်းအစကနေကောင်တာများနှင့်ရေးစင်တာစားပွဲပေါ်မှာအောင်များအတွက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သေးငယ်သူတွေကိုသို့မဟုတ်တန်ပြန်ပြားပဲကောင်တာများအောင်အဘို့ဖြစ်ကြ၏. ကျနော်တို့ကအောက်ပါအရွယ်အစားတွင်ဤပြားဖြတ် :
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်ကွက်များ
Absolute က Black ကျောက်၏ tiles ကြမ်းပြင်ကြွေပြားများအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်, မြို့ရိုးကိုကြွပ်, backsplash အုပ်ကြွပ်. ဤရွေ့ကားကြွပ်မြို့ရိုးကိုကြမ်းပြင်သို့မဟုတ် backsplash များအတွက်အရွယ်အစားအောင်ကွဲပြားခြားနားသောအထူဖြတ်နေကြတယ်. ကဲ့သို့ 10 မီလီမီတာနှင့် 20 မီလီမီတာမြို့ရိုးကိုသို့မဟုတ် backsplash များအတွက်အသုံးပြုကြသည်. စဉ်တွင် 20 မီလီမီတာနှင့် 30 မီလီမီတာကြမ်းပြင်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်. ကျနော်တို့ကအောက်ပါအရွယ်အစားနှင့်အထူရှိအကြွပ်ဖြတ်.
ABPCT2412 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 610x305x10 မီလီမီတာ (2412 ကျောက်ကွက်များ×)
ABPCT2424 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 610x610x12 မီလီမီတာ (2424 ကျောက်ကွက်များ×)
ABPCT1212 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 305x305x10 မီလီမီတာ (1212 ကျောက်ကွက်များ×)
ABPT60302 ပိုလန်ကွက်များ 60x30x2 စင်တီမီတာ - အသင့်ဖြစ်ပြီလားစတော့အိတ်
ABPT60402 ပိုလန်ကွက်များ 60x40x2 စင်တီမီတာ - အမိန့်တွင်
ABPT40402 ပိုလန်ကွက်များ 40x40x2 စင်တီမီတာ - အမိန့်တွင်
ABPT60602 ပိုလန်ကွက်များ 60x60x2 စင်တီမီတာ - အမိန့်တွင်
ငါတို့သည်လည်း၏အထူနှင့်အတူ Absolute က Black ကျောက်အတွက် 18 "x18" ၏အုပ်ကြွပ်နှင့် 400mm x ကို 400mm ချက်တွေကိုအုပ်ကြွပ်အောင် 20 မီလီမီတာနှင့် 10 မီလီမီတာ.
ငါတို့သည်လည်း Absolute က Black ကျောက်အတွက် readymade ကောင်တာဖြတ်, ဤအအရွယ်အစားကိုအောက်ပါအတွက်ရရှိနိုင်ပါ :
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်အသုံးပြုမှု
သငျသညျမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အဘို့အ Absolute က Black ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဒီကျောက်များ၏ကောင်တာများကြော့များမှာ, လှပအစိုင်အခဲမှောင်မိုက်အရောင်. Black ကကောင်တာများအလွန်လူကြိုက်များခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်အောင်၌ရှိကြ၏. သငျသညျဤလှပသောအနက်ရောင်ကျောက်နှင့်အတူအလင်းသွန်းပုံးအဖြစ်မှောင်မိုက်သွန်းဝန်ကြီးအဖွဲ့ကိုသုံးနိုင်သည်.
အဆိုပါ Absolute က Black ကျောက်ခင်းထဲမှာကျယ်ကျယ်ကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်. သငျသညျကြီးတွေခန်းမကျယ်ဝန်းဒေသများ၏အခင်းများအတွက်ကြီးမားသောအရွယ်အစား gangsaw ပြားကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါကဆောက်လုပ်ရေးမှမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်လွင်ပြင်ကြည့်ပေးတော်မူမည်. သငျသညျလညျးဤကျောက်၏အခင်းလုပ်စတုရန်းသို့မဟုတ်စတုဂံအရွယ်အစားအတွက်အုပ်ကြွပ်ကိုသုံးနိုင်သည်. ဒါကယူနီဖောင်းကျောက်သည်နှင့်လွင်ပြင်အရောင်ကတော့အခင်းတစ်ခုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကြည့်ပေးသည်.
သင်သည်သင်၏ရေချိုးခန်း၏အခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့ဤမှောင်မိုက်အနက်ရောင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်. အမှောင်ထဲမှာအရောင်အလင်းအရောင်ရေချိုးကန်နှင့်ရေချိုးခန်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူအကြီးအကြည့်. သငျသညျ 12 အုပ်ကြွပ်ကိုသုံးနိုင်သည်×12 လက်မသို့မဟုတ် 12×24 ရေချိုးခန်း၏ဝတ်နှင့်အခင်းအောင်များအတွက်လက်မ.
စိတ်မသာညည်းတွားအဖြစ်က Black အရောင်သုံးပြီး Absolute က Black ကျောက် Headstone ပိုပြီးသက်ဆိုင်ရာအောင်. Black ကအရောင်များ၏ Headstones ကမ္ဘာအနှံ့လူကြိုက်များ. အဆိုပါအနုပညာရှင် headstone အုပ်ကြွပ်ပေါ်တွင်အလုပ် itching စေ Absolute က Black ကျောက်သည်ဤအုပ်ကြွပ်အောင်အသုံးပြုသည်. သငျသညျထိုကဲ့သို့သော 80 အဖြစ်အရွယ်အစားဝယ်နိုင်×40, 200×60, 200×100 တစ်ဦး headstone အောင်များအတွက်. ကျနော်တို့၏အထူပြားအောင် 4,5,6,8 နှင့် 10 လူအပေါင်းတို့သည်အရွယ်အစားအတွက်စင်တီမီတာ.
သင်ကမီးဖိုချောင် Backsplash များအတွက် Absolute က Black ၏အုပ်ကြွပ်ကိုသုံးနိုင်သည်. Dark Black backsplash tiles are suitable for every color Kitchen Top. သငျသညျမှောငျမိုကျကိုအရောင်နဲ့အလင်းအရောင်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများများအတွက်အုပ်ကြွပ်ကိုသုံးနိုင်သည်.
Black ကကျောက်တက်လှေကားများအပြင်ခေတ်မီခြင်းနှင့်ကြော့များမှာ. Steps and risers made of this black granite are very popular. The black color isaconsistent color and it can be used extensively in making staircases and treads.
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်ချော
ဤသည်က Black ကျောက်ချောအောက်ပါအတွက်ရရှိနိုင် :
ပွတ် Absolute က Black ကျောက်
အဆိုပါပွတ် finish ကို၌ဤကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအသုံးပြုသည်, အခင်း, မြို့ရိုးကိုကြွပ်, ရေချိုးခန်းအုပ်ကြွပ်, headstone, ဝင်းဒိုးကိုထားလိုက်တော့နှင့်မီးဖိုချောင် Backsplash ကွက်များ.
Honed Absolute က Black ကျောက်
Honed ကျောက်ခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအသုံးပြုသည်, ပြင်ပအခင်း, မြို့ရိုးကိုဝတ်နှင့်ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်အုပ်ကြွပ်.
Flamed ချောကျောက်ရေချိုးခန်းအခင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်, ရေကူးကန်အခင်းများနှင့် Non-ချောခင်းလိုအပ်ပါသည်ဘယ်မှာမဆိုရာအရပျ.
သားရေ Finish ကို
သားရေ Absolute က Black ကျောက်ခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်အတူရေပန်းစားသည်ကိုလက်စသတ်.
အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်စျေး
ဒီအနက်ရောင်ကျောက်များ၏စျေးနှုန်းအရွယ်အစားနှင့်အထူပေါ်တွင်မူတည်သည်. လည်း, မပြီးဆုံးလိုက်တဲ့ဒီလှပတဲ့အနက်ရောင်ကျောက်၏စျေးနှုန်းဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်သေးငယ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်.
ဒီကျောက်၏အထွေထွေစျေးနှုန်းန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်7သို့ 8$ / ပိုလနျအတှကျစတုရန်းပေ FOB အိန္ဒိယ3စင်တီမီတာနဲ့ Big ဂျမ်ဘိုပြား. The tiles and small slabs of this granite are comparatively cheaper than big slabs.
သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးစစျဆေးနိုငျ Absolute က Black ကျောက်များ၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးလုပ်နည်း ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးကို parameters တွေကိုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်.
ငါတို့မှာရှိတယ်3အဆိုပါ Absolute က Black ကျောက်အတွက်ရရှိနိုင်အဓိကအမျိုးမျိုး. အိန္ဒိယတွင်အနက်ရောင်ကျောက်အများအပြားကျောက်မိုင်းရှိပါတယ်, တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံရှိပါတယ်. အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျနော်တို့ကအရည်အသွေးမြင့်ခွဲခြားပါပြီ:
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Absolute က Black
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အရည်အသွေး Absolute က Black ကျောက်စျေးပေါအုပ်ကြွပ်အောင်များအတွက်ရေပန်းစားကျောက်ဖြစ်ပါသည်, အနိမ့်ဘတ်ဂျက်အိမ်များအဘို့အသေးငယ်ပြားများနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ.
ဤသည်မှောင်မိုက်အနက်ရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်, အညိုရောင်သွန်းနှင့်အတူ. အဆိုပါအညိုရောင်သွန်းလောင်းသောပြောင်ပြောင်တောက်သောသဘာဝအလငျး၌မြင်နိုင်သည်. သငျသညျသဘာဝအလင်းမလာပါဘူးတဲ့ဧရိယာထဲမှာအနိမ့်ဘတ်ဂျက်ကောင်တာရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ဒီကအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း.
အဆိုပါအညိုရောင်သွန်းအနိမ့်အလငျး၌နီးပါးမမြင်ရတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအနိမ့်အလင်းဧရိယာ၌မှောင်မိုက်ကြည့်. ဒါကအိန္ဒိယကနေတစ်ဦးအလွန်စျေးပေါသောအနက်ရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ Telangana ၏ Khammam ခရိုင်ရှိကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်.
ဤသည်ကိုလည်းဟုခေါ်သည် နှစ်ဆအနက်ရောင်ကျောက်. ဒါဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာမီးဖိုချောင်ကောင်တာများများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, အာဖရိကတိုက်, အိန္ဒိယ.
စံအရည်အသွေး Absolute က Black
အဆိုပါစံအရည်အသွေးမြင့် Absolute က Black ကျောက်အရည်အသွေးကောင်းအုပ်ကြွပ်အောင်များအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ပြားများနှင့်မီးဖိုချောင် Worktops.
ဒါကနှစ်ချက်က Black ကျောက်ထက်မဲမှောင်ဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်လူကြိုက်အများဆုံးအနက်ရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျစံအရည်အသွေးမြင့် Absolute က Black ကျောက်ထဲကနေအရည်အသွေးကောင်းမီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့် Headstone စေနိုင်သည်.
အဆိုပါပရီမီယံက Black ကျောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာစျေးအကြီးဆုံးအနက်ရောင်ကျောက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ဒီကျောက်များအတွက်ရေပန်းစားအမည်သို့မဟုတ်ဝေါဟာရများ Fine ကောက်ပဲသီးနှံ Absolute က Black ကျောက်ဖြစ်ပါသည်.
ထိုကဲ့သို့သောဂျက်က Black ကျောက်အဖြစ်ဤကျောက်အများအပြားသည်အခြားအမည်များရှိပါတယ်, အပိုပရီမီယံက Black ကျောက်စသည်တို့ကို.
အဆိုပါရရှိနိုင်မှုကဒီပစ္စည်းများအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဤအရပ်မှကစျေးကြီးကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ထို့အပွငျ, ဒီကျောက်မိုင်းများနှင့်လုပ်ကွက်များတွင်လွယ်ကူစွာမတွေ့ရှိဖြစ်ပါတယ်ခဲရရှိနိုင်ပါသည်.
ဤသည်ကျောက်အထိမ်းအမှတ်အောင်အသုံးပြုသည်, ကြောကျတိုငျ, Headstone နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့် Worktops.
ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပါသည်, ကနေဒါ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, နဲ့အီတလီစျေးကွက်.
အများအပြားက Black ရှိပါတယ် အိန္ဒိယကနေကျောက်အရောင်များ, ထိုကဲ့သို့သော G20 အဖြစ်, G10, ဘင်္ဂလားက Black ကျောက်, Rajasthan က Black ကျောက် ရရှိနိုင်ပါ, အဆိုပါ Absolute က Black ကျောက်အနက်ရောင်ကိုသွန်းပေါ့ပါးသော်လည်းမနေသော.
သငျသညျယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာ Flodeal စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းများနှင့်ကျောက်ထဲကနေ Absolute က Black ကျောက်နှင့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပစ္စည်းများအထက်အားလုံး type ကိုမဝယ်နိုင်.
5 ပေါ်အခြေခံကာ 18 မဲ
Flodeal Inc မှ
ဇွန်လ 4th, 2018